smooth cardboard Makomo makuru, Jizera Mountains, Bohemian Paradhiso
EMBA ikambani yeSczech ine tsika yakareba uye nzira inoshandiswa kune vanhu uye inharaunda. Zvigadzirwa zvayo zvinokonzerwa nekugadzira pepa uye zvakanyatsoshandiswa zvakare. Kuburikidza nemishonga yayo EMBA, inobatsirawo kuchengetedza uye kuchengetedza tsika netsika dzezvakaitika munyika dzakawanda. Somunhu anokosha mubasa rekushandira, anoona mutoro wayo wekuvandudzwa kwemamiriro ezvinhu akachengeteka uye akachengeteka [...]
Kugadzirwa uye kutengeswa kwekadhibhodhi rakashata nevasungwa
EMBA ikambani yeSczech ine tsika yakareba uye nzira inoshandiswa kune vanhu uye inharaunda. Zvigadzirwa zvayo zvinokonzerwa nekugadzira pepa uye zvakanyatsoshandiswa zvakare. Kuburikidza nemishonga yayo EMBA, inobatsirawo kuchengetedza uye kuchengetedza tsika netsika dzezvakaitika munyika dzakawanda. Somunhu anokosha mubasa rekushandira, anoona mutoro wake wekusimudzira basa rakachengeteka uye rakachengeteka [...]
Kugadzirwa uye kutengeswa kwekatebhodhi rakashata uye kusunga
EMBA spol. s ro Paseky nad Jizerou iri panharaunda mbiri dzakachengetedzwa nzvimbo - Giant Mountains National Park uye nzvimbo yakachengetedzwa ye Jizera Mountains mu Jizera River Valley. Iyi nharaunda haisi yekutarisa kunokosha chete, asiwo nzvimbo yemitambo yemitambo yechando. Kutanga kwenyaya yekambani yakabatanidzwa negore re1882, apo dare rekadhibhodhi rakagadzwa. Chigadzirwa chokutanga chakachena [...]
EMBA spol. s ro Paseky nad Jizerou iri panharaunda mbiri dzakachengetedzwa nzvimbo - Giant Mountains National Park uye nzvimbo yakachengetedzwa ye Jizera Mountains mu Jizera River Valley. Iyi nharaunda haisi yekutarisa kunokosha chete, asiwo nzvimbo yemitambo yemitambo yechando. Kutanga kwenyaya yekambani yakabatanidzwa negore re1882, apo dare rekadhibhodhi rakagadzwa. Chigadzirwa chekutanga chaiva chichena chakagadzirwa nemaoko. Kune imwe [...]
Panorama Giant Mountains, Jizera Mountains, Paseky nad Jizerou
Paseky nad Jizerou ari mumusha Semily District gomo iri Liberec mudunhu, kumadokero Mountains Giant pamuganhu Jizera kurudyi Jizerský wangu. 252 vagari kurarama pano; uwandu dzimba nezvimwe zvivako nhasi kushumira kuzvivaraidza pavungano. The nechekuchamhembe Municipality ndohwaJehovha Mountains Giant National Park, kusanganisira kumaodzanyemba huru dzinogarwa dzakabatana muna pla Giant Mountains. [...]
EMBA spol. s ro is a Czech company pamuganhu pakati peGiant Mountains uye Jizera Mountains. Kutanga nhoroondo tara bepa iri Paseky nad Jizerou kusvikira gore 1882, kana paiva Rösslerovými hama nheyo fekitari kuti dzakaitwa nemaoko chena makadhibhokisi kavha zvigadzirwa kuti girazi indasitiri muna Jablonec mudunhu. Nokuda kwehupenyu hwose hwekambani, [...]